सरकारी वार्ता टोलीले विज्ञप्ति निकालेर गर्यो डा. केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न आग्रह « Postpati – News For All
सरकारी वार्ता टोलीले विज्ञप्ति निकालेर गर्यो डा. केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न आग्रह
असोज २४, काठमाडौं । सरकार वार्ता टोलीले अनसन अन्त्य गर्न डा. गोविन्द केसीलाई आग्रह गरेको छ ।
#सरकारी वार्ता टोली